Pop up bhinzi banner
Applications:Indoor & Outdoor Advertising, Car yard, Beaches, Makwikwi, Mafaro, Shows, Exhibitions, Zviitiko, Promotions, Michato, Mapati, Zvitoro, Misika, Auto Shows etc.
Mabhenji ebhinzi, akatumidzwa zita reovhari, anozivikanwawo sePop up banner kana Pop-out banner,Beachbanner
Superior Flat simbi chitubu sechimiro chechimiro, chakasimba uye chakasimba.Yese seti pops inovhurika kuita yakazara saizi kuratidza ipapo, Yakanyanya kugadzikana kana ichiratidzwa uye nyore kupeta pasi mubhegi rekutakura.
2pcs machira mabhena anogona kudhindwa akafanana kana akasiyana artwork kuwedzera yako yekusimudzira maitiro.Iwo machira mabhenji ane padivi/pazasi mabhandi chinhambwe Anochinjika uye anogonesa kuti uzorodze kana kugadzira mameseji matsva zviri nyore pachiitiko chinotevera.
Mumwe nomumweA- Frame Banner Kitinosanganisira Carry Case uye ina Ground Pegs inochengetedza zviratidzo pasi panzvimbo yakapfava.Panzvimbo dzakaoma, zvinokurudzirwa kuisa masaga emvura kana ejecha (asina kusanganisirwa) pamabhandi ekure kuitira kuchengetedza.
Inowanikwa mumhando nhatu, Diki (130 x 70cm), Pakati (200 x 90 cm), uye Huru (250 x 100cm).imwe saizi inogona kugadzirwa.
(1) Special connectors yakagadzirwa neWZRODS, kupeta banner iri nyore pane zvimwe zvigadzirwa zvakafanana pamusika.
(2) Durable simbi chitubu furemu inoita kuti dhizaini ive nenzvimbo yakati sandara.
(3) Mucheka wakadhindwa unogona kutsiviwa nyore nyore.
(4) kutakura bhegi rinosanganisirwa, nyore kuchengeta uye kutakura
(5) Mapegi esimbi anosanganisirwa kuchengetedza mumamiriro emhepo
(6) Huremu hwakasiyana hwakawedzerwa hunoshanda (bhegi rejecha, bhegi remvura, nezvimwewo)
GW (hardware chete)
Zvakapfuura: Lantern Banner
Zvinotevera: Pop Up Vertical Banner